रामवीर मानन्धर : सांसद छाड्दा उल्टै प्रसन्न, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
रामवीर मानन्धर : सांसद छाड्दा उल्टै प्रसन्न
काठमाडौं। अरूलाई ‘माननीय’ छाड्न धेरै गाह्रो पर्छ। नेता वामदेव गौतमका लागि सिट खालि गरिदिन नेकपाले धेरै सांसदलाई दबाब दियो। कार्यकर्ताको जोडबलमा तिनीहरू जोगिए। अन्त्यमा काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराउने टुंगो लाग्यो। उनी भने दुःखी होइन, बरु खुसी देखिन्छन्। मंगलबार बिहान आफ्नै घरमा भेला भएका कार्यकर्तालाई उनी उल्टै सम्झाइरहेका थिए। उनीहरू पुनर्विचार गर्न भन्थे। मानन्धर तिनलाई भाँती पुर्‍याएर सम्झाउँथे।
उनका घर बालाजु बाइपासमा निर्वाचन क्षेत्रभरिका पार्टी जनप्रतिनिधि भेला भएका थिए। तिनीहरूले गौतमका लागि पद छाड्न लागेकोबारे जिज्ञासा राखेका थिए। मानन्धरे भने, ‘हो।’ उनले आफू पार्टी केन्द्रीय समिति वा सरकार कतै नभई सांसद मात्र हुँदा कसैले नटेरेको अनुभूति सुनाए। त्यही कारण क्षेत्रको विकास गर्न नसकेको बताए।
पार्टी शीर्ष नेताहरूसँग सोमबार छलफल गरेपछि उनले पद छाड्ने ‘स्वीकृतिपत्र’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका थिए। उनका शुभचिन्तकले हारेका नेतालाई ठाउँ खाली गरिदिँदा गलत नजिर बस्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। प्रत्युत्तरमा उनले अझ ठूलो उपलब्धिका लागि छाडेको बताए। उनकै अनुसार शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रियसभा सदस्य, मन्त्री र पार्टी केन्द्रीय सदस्य बनाउने विश्वास दिलाएका छन्।
त्यसमा उनी ढुक्क देखिन्थे। भने, ‘मलाई राजीनामा दिए पनि कतै निकाल्दैनन्। म सांसदको सांसदै हुन्छु। केही समय खाली हुने मात्र हो। राष्ट्रिय सभामा डेढ वर्षपछि लग्ने कुरा छ। म पार्टीभित्र बार्गेनिङ गर्छु। म मन्त्री भए तपाईंलाई चुनाव जित्न सहज हुन्छ भन्छु। तेस्रो कुरा पार्टी केन्द्रीय सदस्य दुई वर्षपछि सहमतिमा बनेपनि, नबने पनि प्यानलमा पर्छु नै।’
मानन्धरले आफू सांसद मात्रै भएकाले प्रहरीका हाकिमले नटेरेको, काठमाडौं विकास प्राधिकरणका अध्यक्ष भाइकाजी तिवारीले समेत विकास योजनामा आलटाल गरेको गुनासो सुनाए। त्यसकारण पनि शक्तिशाली नेतालाई निर्वाचित गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो।
‘अहिले हामीलाई अर्थमन्त्रीले वास्ता गरिरहनु भएको छैन, मन्त्रालयले झुलाउने काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘मेरो राजीनामासँगै मैले निर्वाचन क्षेत्रका विकासे योजनामा गौतमसँग लगानी प्रस्ताव गर्छु। यसमा उहाँको परीक्षा हुनेछ।’ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म योजना लैजाने पनि उनले दाबी गरे।
गौतमलाई अपमानित नगर्न र चुनावी तयारीमा लाग्न मानन्धरले कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिए। उनले गौतमको व्यक्तित्वको प्रशंसामा पनि केहीबेर बोले। भने, ‘वामदेव कमरेड मात्रै एउटा यस्तो मान्छे हो, जसले पार्टी विभाजनपछि एकताका क्रममा एक्लैले भूमिका खेल्नुभयो। एमाले–माओवादी मिलाउन पनि उत्तिकै भूमिका खेल्नुभयो। जनतालाई बुझाउन आजैदेखि यो बुझाउन थाल्नुस्।’ अन्नपूर्णपोष्ट दैनिक